Imimmisele yenkonzo - Sendfiles.online
Ngokungena kwiwebhusayithi kwi-https: //sendfiles.online, uyavuma ukubophelelwa yile migaqo yenkonzo, yonke imithetho esetyenziswayo kunye nemigaqo, kwaye uyavuma ukuba unoxanduva lokuthobela nayiphi na imithetho yasekhaya esebenzayo. Ukuba awuvumi w
Imvume inikezelwa okwethutyana ikopi enye yezixhobo (ulwazi okanye isoftware) kwiwebhusayithi yeSplfiles.online yokujonga ubuqu, engeyiyo yorhwebo kuphela. Esi sisibonelelo selayisensi, hayi ukudluliselwa isihloko, kwaye phantsi kwetyala
Guqula okanye ukope izixhobo;
Sebenzisa izixhobo zaso nasiphi na iinjongo zentengiso, okanye nayiphi na into kawonkewonke (yokuthengisa okanye engeyiyo yezorhwebo);
ukuzama ukubola okanye ukuguqula injineli nayiphi na isoftware equlathe iwebhusayithi ye-Sendfiles.online;
susa naliphi na ilungelo lokushicilela okanye okunye ukubonelela kwizinto; okanye
tshintshela izixhobo komnye umntu okanye 'kwisipili' izixhobo zayo nayiphi na enye iseva.
Eli phepha-mvume liza kupheliswa ngokuzenzekelayo ukuba wophula nayiphi na kwezi zithintelo kwaye unokupheliswa ngu-Sendfiles.online nangaliphi na ixesha. Emva kokuphelisa ukubonwa kwakho kwezi zixhobo okanye ekuphelisweni kwelayisensi, kufuneka utshabalalise nayiphi na
3. Umgaqo-nkqubo woGcino
Sendfiles.online igcina iifayile iiyure ezingama-48. Ngelixa apho iifayile zicinyiwe. Iifayile zinxulumene nedilesi ye-imeyile eyilayisheyo. Ukuba kungeniswe i-imeyile ukuba ithunyelwe, nayo iyagcinwa. Ukuba iifayile ezithunyelwe apho zisuka kumsebenzisi we-Pro, kusebenza amagama ahlukeneyo kwaye ziya kuboniswa kwiphepha lekhonkco lokukhuphela.
Izixhobo ezikwiWindowsfiles.online iwebhusayithi zinikezelwa 'njengoko kunjalo'. Sendfiles.online ayenzi siqinisekiso, esivakalayo okanye esichaziweyo, kwaye oku kuyabhengeza kwaye kuchaze zonke ezinye iziqinisekiso kuquka, ngaphandle komda, iiwaranti ezichaziweyo okanye umda
Ngapha koko, i-Sendfiles.online ayigunyazisi okanye yenza naziphi na izibonakaliso malunga nokuchaneka, iziphumo ezinokubakho, okanye ukuthembeka kokusetyenziswa kwezinto ezisetyenziswayo kwiwebhusayithi yayo okanye ngenye indlela enxulumene nezixhobo ezinjalo okanye nakweziphi na iziza ezinxulumene nale ndawo.
Akusayi kubakho tyala eliya kuthunyelwa Sendiles.online okanye abaxhasi bayo bahlawulelwe nakuphi na ukonakala (kubandakanywa, ngaphandle kwemida, ukonakaliswa kokulahleka kwedatha okanye inzuzo, okanye ngenxa yophazamiso lweshishini) kuvela ngenxa yokusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa izixhobo ezithunyelwa kwi-Sendfiles.o
6. Ukuchaneka kwezinto
Izixhobo ezibonakala kwiwebhusayithi ye-Sendfiles.online inokuquka ubuchwephesha, typographical, okanye iimpazamo zefoto. Sendfiles.online ayigunyazisi ukuba naziphi na izinto ezikhoyo kwiwebhusayithi yayo zichanekile, zigqibelele okanye zangoku. Imiyalezo yokuhambisa.online may m
I-Sendfiles.online ayihlolisisanga zonke iisayithi ezinxulunyaniswe kwiwebhusayithi yayo kwaye ayinoxanduva lokuqulathwe kuyo nayiphi na indawo enjalo. Ukufakwa kwalo naliphi na ikhonkco akuthethi ukuqinisekiswa yi-Sendfiles.online yendawo. Ukusetyenziswa kwayo nayiphi na iwebhusayithi enxibelelanayo
I-Sendfiles.online inokuhlaziya le miba yenkonzo yewebhusayithi yayo nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukubotshwa nguhlobo lwangoku lwele migaqo yenkonzo.
9. Umthetho olawulayo
Le migqaliselo nemiqathango ilawulwa kwaye ichazwe ngokungqinelana nemithetho ye-Connecticut kwaye ungenisa ngokungathandabuzekiyo kulawulo olukhethekileyo lweenkundla zelo lizwe okanye indawo.
© 2021 Sendfiles.online v1.15 | 75,266 Iifayile ezithunyelwe ukusukela ngo-2020